မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Meet with Lee Min Ho again in SG
Meet with Lee Min Ho again in SG
စကာင်္ပူက လီမင်ဟို ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူနဲ့ ထပ်တွေ့ရဖို့ အခွင့်အရေးရှိလာပြန်ပါပြီ... LG’s latest Android-powered smartphone, the LG Optimus GT540 ပရိုမိုးရှင်းအတွက် လီမင်ဟို စကာင်္ပူသို့ တဖန်ရောက်လို့လာပြန်ပါပြီ... သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ LG Optimus GT540 ဖုန်းကို S$418/- without contract နဲ့ SingTel, Starhub and M1 outlets, as well as at Arrow Communication retail stores, Handphone Shop outlets, and LG concept stores တွေမှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်... အဲဒိဖုန်းဝယ်တဲ့ ပထမဆုံး အယောက် ၁၅၀၀ ကို တစ်ဦးလျှင် လက်မှတ် တစ်စုံစီရမှာဖြစ်ပါတယ်... First come First serve ဖြစ်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးဖြတ်ပြီး အမြန်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်... အဲဒိ အယောက် ၁၅၀၀ ကတော့ လီမင်ဟိုနဲ့ 31 July 2010 ရောက်ရင် the Marina Bay Sands မှာ သူ့ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဒါ့အပြင် အဲဒိ လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူထဲက www.lgoptimus.com.sg ဒီဝက်ဆိုဒ်မှာ သွားပြီး အွန်လိုင်း ရက်ဂျစ်စတာ လုပ်မယ်ဆိုပါက ကံထူးလျှင် လီမင်ဟိုရဲ့ လက်မှတ်ထိုးပွဲနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲကို တက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
လက်မှတ်ထိုးပွဲအတွက် လူအယောက် ၂၀၀ ကို မဲဖောက်မှာဖြစ်ပြီး... ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲအတွက်တော့ ကံထူးရှင် အယောက် ၁၀၀ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်....
ဒါတွေနဲ့တင် စိတ်လှုပ်ရှားရတာ မကသေးပါဘူး... အဲဒိပွဲသွားတဲ့ထဲက လီမင်ဟို စိတ်ကြိုက် ကံထူးရှင် ၅ယောက်ကို ရွေးပြီး သူနဲ့အတူ personal time ရှိခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
LG Optimus GT540 presents
Meet and Greet with Lee Min Ho
Date: 31 July 2010, Saturday
Venue: Hall F Basement 2, The Sands Expo & Convention Center, Marina Bay Sands
Official website: LG Optimus GT540 (Singapore)
ဆီပုံးမှာတော့ hh ဆိုသူက လီမင်ဟို လက်မှတ်ကို ၁၀၀ နဲ့ ရောင်းမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်... စိတ်ဝင်စားသူများ သူ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်ကြပါ... မဗေဒါကတော့ အလကားလဲရမယ်... အားလဲအားမယ်ဆိုရင်တော့ သွားကြည့်ချင်ပါတယ်... ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ မသွားတော့ပါဘူး... သွားလဲ အမြဲ ကံမကောင်းတတ်တဲ့ကျွန်မ အဲဒိ ကံထူးရှင် ၅ယောက်နေရာ ရဖို့နေနေသာသာ... ဟို အရောက် ၃၀၀ ထဲ ပါရင်တောင် ကံကောင်း... အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ဓာတ်တွေအလကားနေ ကျနေအုံးမယ်... ပြီးတော့ သွားလိုက်လို့ ဂျန်ဂမ်ဆပ်လို ရောဂါတက်ပြီး ပိုဆိုးသွားပါအုံးမယ်... လေယာဉ်ကွင်းတော့ သွားရင်ကောင်းမလားမသိဘူး... flight detail လေး ရှာဖွေ မွှေနှောက်ကြည့်ပါအုံးမယ်...
Source from http://www.izone.sg/2010/06/19/ebuzz-events-meet-lee-min-ho-with-lg-optimus-gt540/
Posted by mabaydar at 8:57 PM
လေယာဉ်ကွင်း သွားမယ်ဆို ပြောနော်.. အားရင် သွားချင်လို့း)))
အခုမှ ဖုန်းသွားဝယ်ရင် ၁၅၀၀ ထဲပါနိုင်သေးရဲ့လားဟင်??
6/27/2010 10:13 PM
တွေ့ခွင့်မသာတဲ့ ဘ၀ပါကွယ်..း)
6/28/2010 1:42 AM
New MTV of TOP - Turn It Up
အက်ဂါ (Zhou Tai-Shan) အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဖူးစာစုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် (၄)
Will You Be There For Them??
မြန်မာပြည်မှာ အက်ဂါ၊ ထိုင်ဝမ်မှာ Zhoug Tai-Shan (趙...
Taiwan ရောက် မြန်မာပြည်က ကြယ်တစ်ပွင့်
Jang Keun Suk fan meeting Ending (7 & 8)